Manangana trano | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Manangana trano
Ahoana ny fomba hananganana trano amin'ny trano fahavaratra miaraka amin'ny tananao
Ny fiompiana zana-trondro amin'ny dacha dia orinasa malaza. Ny karazam-borona tsirairay dia tokony hanana toerana manokana izay ahafahana mandinika sy mikaroka. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay ny hilaza ny dingana rehetra amin'ny fananganana ity rafitra ity, ary koa ireo fepetra takiana amin'ny trano. Ny fanorenana azy io dia tsy asa sarotra toy izany.
Inona no atao hoe brooder, famokarana sela manokana ho an'ny fambolena biby
Raha mikolokolo volombava matevina ianao, dia zava-dehibe ny mikarakara bebe kokoa ny fambolena azy. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia tonga amin'ny famonjena ny broder. Mazava ho azy, afaka mividy boaty any amin'ny fivarotana na eny an-tsena ianao, saingy sarotra be izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hananganana lohan-drakitra amin'ny tananao manokana ianao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Manangana trano